Amanqaku eDhruv Mehta kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Dhruv Mehta
UDhruv Mehta yingcali yeNtengiso yeDijithali kwaye ubonelela ngezisombululo kwixesha ledijithali. Ngexesha lakhe lasimahla, uyakuthanda ukubhala kubuchwephesha kunye nentengiso. Uhlala enegalelo kwiTweak Biz yakho.
NgoLwesihlanu, Agasti 7, 2020 NgoLwesihlanu, Agasti 7, 2020 Dhruv Mehta
Abathengi ligazi lobomi kuwo onke amashishini. Nangona kunjalo, ziinkampani ezimbalwa kuphela ezinokuthi zihambisane neemfuno zazo eziguqukayo, zishiya ifestile enkulu yamathuba kumashishini akulungeleyo ukutyala imali kumava abathengi kunye nokuphucula isabelo sabo sentengiso. Akumangalisi ukuba ulawulo lwe-CX luvele njengeyona nto iphambili kwiinkokeli zeshishini ezibeka isixa esonyukayo semithombo yezixhobo ukuze ihlawulwe. Nangona kunjalo, ngaphandle kwetekhnoloji elungileyo, akunakwenzeka ukufezekisa